हीराको हिम्मत ! - Everest Awaj Everest Awaj
हीराको हिम्मत !
भनिन्छ, मान्छेले आफ्ना लागि मात्र नभएर अरुका लागि पनि केही गर्न थाल्दछ, समाजमा उसको प्रशंसा हुन थाल्छ। अचेल, यस्तै प्रशंसाको भारी बोक्दैछिन् हीरा पेग्नी, तामाङले। पाइलट बन्ने सपना बुनेकी थिइन् उनले र त पढेकी थिइन् बुटवलको ग्लोरियस कलेजमा साइन्स विषय लिई कक्षा ११/१२ तर उनलाई फेसन डिजाइनर्स पो बनाइ दियो समयले।
आइएफसी फेसन डिजाइनिङबाट हीराले डिप्लोमा गरिन् । सीटीइभीटीबाट लेभल वानको सीप परीक्षण उत्तीर्ण गरिन् र थालिन् आफ्नै पौरखमा हिमांशु बुटिक एण्ड ट्रनिङ सेन्टर । १० वर्ष पुग्यो उनी पौरखी पात्र बनेको। आफूले तालिम लिएको भने १२ वर्ष पुग्दैछ।
समयको क्रममा उनले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट आर्टसतर्फ स्नातक तेस्रो वर्षसम्म अध्ययन गरिन्। तर, सो तह पूरा गरिनन्। कारण उनलाई फेसन डिजाइनिङमा रस पसिसकेको थियो। हातमा हरिया नोट आउन थालिसकेका थिए।
आफ्नो सेन्टरमा आफू स्वरोजगार छिन्। आफैले सिकाएका ५ जना बहिनीहरुलाई रोजगार दिएकी छन््। कामका आधारमा बहिनीहरुलाई तलब दिएकी छिन्। एकजना बहिनीले कम्तिमा ७ हजारदेखि २५ हजारसम्म तलब पाउने गरेको हीराले सुनाइन्। उनको सेन्टरमा प्रारम्भिक सिलाई कटाईदेखि फेसन डिजाइनको एडभान्स कोर्ष समेत सिकाइन्छ। न्यूनतम ६ महिनादेखि एकवर्षमा सबै कोर्षहरु सकिन्छन्। पूरै तालिम लिदाँ एकजनाले ६० हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म तालिम सेन्टरमा बुझाउनु पर्छ।
१० वर्षको दौरानमा सय बढी दिदीबहिनीहरुलाई उनले फेसनसम्बन्धी ज्ञान दिइन्, सीप सिकाइन् र गरिखाने बाटो देखाइन्। आज देशका धेरै सहरहरुमा उनका विद्यार्थीहरुले नाम र दाम कमाएका छन्। पूर्व झापादेखि बुटवल, पोखरा, भैरहवा, पाल्पा, स्याङ्जामा उनका करिव ९० जना बढी महिला दिदीबहिनीहरु स्वरोजगार छन्। तिनै दिदीबहिनीहरुले हीरालाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिएर गरिखाने बनाएकोमा प्रशंसा गर्दै आएका छन्। हजारौं पटक नमन गरेका छन् र करोडौं पटक सम्झना गरेका छन्।
बुटवलको आदर्शनगरको सानो कोठाबाट सुरु गरेको उनको तालिम सेन्टर अहिले बुटवलकै सिंह कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलामा शान्दार रुपमा संचालनमा छ। नगरपालिका, वाणिज्यमा औपचारिक दर्ता गरी संचालन गरेको उक्त तालिम सेन्टरलाई भविष्यमा सीटीइभीटीसँग जोडेर लैजाने योजना बनाएकी छन्। घर भाडामात्र उनले मासिक ३५ हजार तिर्ने गरेकी छिन्। तालिम सेन्टरबाट भएको कमाईले घरव्यवहार चलाएकी छन्। छोरालाई पालनपोषण र शिक्षा–दिक्षा दिएकी छन्।
गत वर्षको चैत्र अन्तिममा उनले आफ्नै हिमांशु बुटिक एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टरको मुख्य आयोजनामा पहिलो पटक हिमांशु डिजाइर्नर रन वे–२०२१ सम्पन्न गरेकी छन्। करिव ४ लाख ५० हजारको लगानीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका लागि आफ्ना विद्यार्थीहरु, साथीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु र अग्रजहरुले सक्दो आर्थिक, भौतिक एवं नैतिक सहयोग गरेका थिए। त्यतिबेला उनका शिष्यहरुले आफ्नो फेसन प्रतिभाहरु मोडेलहरुमार्फत प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमले हीराको हिम्मत प्रदर्शन भएको र उनलाई हौसला मिलेको थियो।
डिजाइर्नर रन वे–२०२१ मा कहलिएका फेसन डिजाइनर्सहरु मनीष राई, श्रृष्टि गुरुङ, एलिना गुरुङ, केशरकला थापा र सपना पुन निर्णायक थिए। केन्द्रीय राजधानीबाहिर बिरलै हुने यस्ता कार्यक्रमहरु बुटवलमा आफ्नै वर्कत र क्षमताले सम्पन्न गर्नु हीराका निम्ति कोसेढुङ्गो साबित भएको छ । त्यतिबेला समेत हीराको उच्च प्रशंसा भएको थियो।
हीराले उक्त डिजाइर्नर रन वे गर्नुका कारणमध्ये आफूले सिकाएका ज्ञान, सीपलाई व्यवहारिक रुपमा सबैका माझ प्रदर्शन गर्नु नै थियो। आफूले सिकाएर तयार पारेका शिष्यहरुका निम्ति जब मार्केटिङ गर्नु थियो। हिमांशु बुटिक एण्ड ट्रेनिङ सेन्टरलाई धेरैका माँझ पुराउनु त छँदै थियो। त्यसैगरी आफू जस्तै एकल महिलाहरुलाई कार्यक्रमबाट बचेको पैसाले सहयोग गर्नु पनि थियो। यिनै उद्देश्यका साथ सम्पन्न गरिएको कार्यक्रमलाई उत्साह थप्न बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन–नेपालका अध्यक्ष गोमादेवी आचार्य रन वे कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा हीरालाई हौसला थप्न पुगेकी थिइन्।
‘सर्पले एकपटकमात्र ठुङ्छ, तर दुश्मनले हजारौ पटक भनेको सुनिन्छ।’ उनको जीवनमा दुश्मन बनेर आयो काल! जन्मेको पाँचौ दिनमा पहिलो सन्तानलाई आफ्नै कोखबाट खोसेर लग्यो। त्यसैगरी आयो काल बनेर कोरोना। लग्यो आफ्नै शिरको सिन्दूर श्रीमान्। गएको मंसीर महिना उनका लागि पीडाको पहाड बन्यो। तिनाउ जस्तै बग्यो आँसु। सहारा खोसेर लैजाने उनको दुश्मन काल नै थियो।
२०६४ सालमा हेटौंडाका ज्ञानु तामाङसँग कपिलवस्तु बाणगंगा निवासी हीरा पेग्नीले विहे गरेकी थिइन्। जीवनको १३ वर्ष संगसँगै बित्दा नबित्दै ज्ञानुले हीरालाई कान्छो छोराको जिम्मा लगाएर यस संसारबाट बिदा भए। उनीहरुको अन्तरजातीय विहे। भूगोल र जाती फरक भएपनि उनीहरुका भावना एकै थिए। माया, स्नेह र प्रेम अगाध थियो। कोरोनाले शिथिल भएर ज्ञानुले ग्राण्डी अस्पतालको भेन्टिेलटरमा जीवन त्याग्दा हीराले आफ्नो सर्वस्व लुटिएको ठानिन् ।
हीराले हिम्मत हारेकी छैनन्। आफूलाई आफ्नै तालिम सेन्टरमा व्यस्त बनाएकी छन्। आफूजस्तै एकल महिलाहरुलाई सहयोग गर्ने संकल्प कसेकी छन्। आफ्नो ज्ञान, सीपलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र नेपाली महिलाहरुलाई आम्दानीको बाटो देखाउने सपना बुनेकी छन्। हीराले शोकलाई शक्तिमा बदलेकी छन्। आफूमा हारको मानसिकता पालेकी छैनन्, बरु हिम्मतको राँको मनमा बालेकी छन्।
दम्पत्तीका प्रेम प्रतिफल चार वर्षे छोरो। उसकै साथमा जीवनको यात्रा तय गरेकी हीरालाई सबैको हौसला जरुरी छ। हौसलामा हिम्मत मिसाई दिनुपर्ने छ। सामाजिक सेवामा लाग्दै गरेकी हीराले आफ्नो पाइलट बन्ने सपनालाई फेसन डिजाइनिङमा सुन्दर तरिकाले सजाएकी छन्। हिम्मत बटुलेकी छिन्। आफ्नो कर्मको सगरमाथा चढ्ने प्रयास गर्दैछिन्।